Na Eprel 22 Warhammer 40.000: Mechanicus ga-ahapụ ya | Gam akporosis
Warhammer 40.000: Mechanicus na-abịa n'April na gam akporo
Mgbe anyị na-echere Total War Battles: Warhammer na gam akporo, ugbu a, anyị nwere ike imeghe aru gi na Warhammer 40.000: Mechanicus, n'ihi na ọ ga-abịarute n'ọnwa Eprel na ekwentị gam akporo anyị.
Dị ka Anyị na-atụ anya na a na-atụ anya Total War ka a tụrụ anya ya na nnukwu egwuregwu dabere na Warhmmer, ma lee anya na egwuregwu ndị a raara nye eluigwe na ala apụtaworị, Mechanicus nwere ike ịbụ tupu na mgbe maka egwuregwu Warhammer na gam akporo.
Anyi na ekwu ya n'ihi na Warhammer 40.000: Mechanicus bu a egwuregwu na-abịa site consoles na PC ya na ogo zuru oke na akụrụngwa iji kwado onwe ya ma ọ bụrụ na ọdụ ụgbọ mmiri ahụ sitere na ọkọ. Anyị na-ekwu maka ụdị egwuregwu X-COM nke dabeere na atụmatụ na ọgụ na-agbanye aka na nke ahụ ga-abata na Eprel 22 na gam akporo.
Kalypso Media weputara oge ikwusa ọbịbịa nke egwuregwu ahụ Strateham Warhammer 40.000: Mechanicus maka PC na Console site na Kasedo Games; na-agụta na ọ raara nye mbadamba mbadamba, yabụ ka ịnweghị ngwaọrụ nwere mmesapụ aka na sentimita, ọ ga-esiri ya ike ịnụ ụtọ ya.
Anyị amadịla ụgwọ nke egwuregwu egwuregwu a ya 11,99 euro ga-ekwesị maka anyị n'akpa uwe nakwa na ọ ga-egosipụta mgbasawanye Heretek, egwuregwu nke a na-arụ ọrụ iji mee ka njikwa emetụ aka ka ọ dịrị anyị mfe ịnụ ụtọ atụmatụ ọgụ ya.
Ya mere ugbu a anyị nwere ike ịga na-eme ohere na mbadamba anyị maka egwuregwu Warhammer a na-ekwe nkwa na ọ bụrụ na ị gbasoo ntuziaka ndị a tụrụ na PC na consoles, ọ ga-enwe ogo zuru oke ịsọpụrụ Warhammer eluigwe na ala nke na-aga n'ihu na egwuregwu egwuregwu mkpanaka, yana mgbakwunye na ọdachi na Play Store (ma ọ bụ anyị ga-akpọ aha nke ọ bụla n'ime ha).
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Egwuregwu gam akporo » Warhammer 40.000: Mechanicus na-abịa n'April na gam akporo
Otu esi achọpụta nọmba nzuzo
Samsung kwupụtara mmelite One UI 3.1 maka Galaxy S20, Galaxy Note 20 na 15 ụdị ndị ọzọ